Madaxweynihii hore ee DDS Cabdi Maxamuud Cumar oo Cafis dalbaday – AwKutub News
Madaxweynihii hore ee DDS Cabdi Maxamuud Cumar oo Cafis dalbaday
By awkutubnews September 28, 2018
Leave a Comment on Madaxweynihii hore ee DDS Cabdi Maxamuud Cumar oo Cafis dalbaday
Madaxweynihii hore ee Dawlad Deegaanka Soomaalida, Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa waxa uu ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ka codsaday inuu cafiyo isaga iyo dadka la eedaysan.
Hore waxaa u jiray in Cabdi Maxamuud iyo xubnaha la xiran ay ka cabanayeen in aan qorraxda la tusin, iyo in ehelkooda aan luqadda Amxaariga ku hadlin lagu khasbo in ay afka Amxaariga ku hadlaan.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maxkamadda ka dalbaday in isaga iyo xubnaha la xiran “laga gaarsiiyo ra’iisul wasaaraha Itoobiyaha inuu cafis u fidiyo, maadaama uu wakhti is cafis lagu jiro”.
Hore ayuu Cabdi Maxamuud Cumar cafis uga dalbaday dadka deegaanka Soomaalida.
Tags: CMC DDS Itoobiya Wararka
Previous Entry Xog ku saabsan iskuullada dowladdu lasoo wareegtay
Next Entry Wararkii ugu danbeeyay ee dhul-gariirkii ku dhuftay Induniisiyaa